တောင်သမန်သားလေး: June 2014
ဖုန်းထဲမှာရှိထားသင့်တဲ့ အလန်းဇယား မြန်မာ Ringtones 45 ခုမရသေးသူတွေအတွက် ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်
ဒီ ( apk ) လေးကို ဖုန်းထဲထည့်လိုက်မယ်ဆို Ringtones 45 ခု အလွယ်တကူရမှာ
နာမည်ကြီးနေတဲ့ သီချင်းတွေကို လိုသလောက်ဖြတ်ပီး ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပီး
45 မျိုး ပါပါတယ် ။ နံပတ်စဉ်အလိုက် ဖွင့်ကြည့်ပါ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် နံပတ်ပေါ်
တည်ထွင်ထားတာပါ ။ သုံးချင်တဲ့သူ မသုံးရသေးသူ အောက်ကလင့်မှာယူပါ
Download - MM Ringtones Collection
Download - http://www73.zippyshare.com/v/10272339/file.html
IDM Fix Fake Serial (Only Key) IDM အဆင်မပြေသူများ
နဒီအမျိုးသားရေးစာပေဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေသည့် ဖျာပုံနဒီ ၏ "ဘင်္ဂါလီတို့၏နယ်မြေလုပွဲ"စာအုပ်မှာ ဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ အလိမ်အထုပ်များကိုကျမ်းအကိုးအကားများစွာဖြင့်ဖြေဆိုဖွင့်ချထားသည့် လက်စွဲကျမ်းတစောင်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် (၁)“ဘင်္ဂါလီရှင်းတမ်း”၊ (၂)“မွတ်စလင်ရေးရာ”၊ (၃)“အမြင်များ”၊ (၄)“ကာကွယ်ရေး” စသဖြင့် ကဏ္ဍလေးခု ခွဲပြီး စုံလင်တိကျစွာ ပြုစုထားခြင်းကြောင့် ဘင်္ဂါလီတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံအား နယ်မြေလုရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့်သမိုင်းအဆက်ဆက် ဖြစ်ရပ်များ၊ ဒါရူးလ်အစ္စလာမ်ထူထောင်ရေး မြေပေါ်၊မြေအောက်ကြိုးပမ်းမှုများ၊ ဖြန့်ကြက်လာသောနိုင်ငံတကာကွန်ယက်တို့အပြင် OICအကြောင်း သမိုင်းအချက်များစွာကို ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
စာအုပ်မှာယူလိုသူများအနေဖြင့်- nadipublishinggorip@gmail.com nadigroup2014@gmail.com သို့မဟုတ် FB Chat Box မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
(ဘင်္ဂါလီတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကို ရိုဟင်ဂျာဟု လိမ်ညာပြီး တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအဖြစ် ပြောဆိုနေသည်များကို အထိရောက်ဆုံးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းလိုလျှင် ဒီစာအုပ်ကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် စာအုပ်အားဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကြော်ငြာအား မျှဝေခြင်းကို သင့်အနေနှင့် အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ)
— with သကြား ညို, Myat Thet Khine Soe,ရာဇာဓိ ရာဇာ and Moe Lay Thu.
အခု viber ကို install လုပ်ပါမယ် http://download.viber.com/desktop/windows/ViberSetup.exe မှာ Download လိုက်ပါ အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
✏Windows 8 အတွက် Zawgyi-One Font ၊ Zawgyi keyboard၊ IE Zawgyi Gtalk Font✏
-Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက်​ အရင်ဦးဆုံး Zawgyi Font and Zawgyi typing Keyboard မရှိသေးသူများ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Links လေးတွေကနေ အရင်းဆုံးဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါ-
★Download For Zawgyi-One font★
★Download for Zawgyi keyboard★
★Download for IE Zawgyi Gtalk Font ★
ပြီးရင် Zawgyi-One Font ကိုInstall လုပ်ပါ…. Zawgyi typing Keyboard ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Setup ဆိုတာလေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ...။ ပြီးရင် ဒုတိယဖိုင်ထဲက IEZawGyiGtalkfont ဆိုတာကို install လုပ်ပါ....။ အဲဒါတွေက ပထမအဆင့်ပါ… ဒုတိယအဆင့်က Control Panel ထဲဝင်ပြီး Language Setting ကိုပြင်ရပါမယ်…။
အဆင့်(၁) Control Panel ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် All Control Panel Items ထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ…။ ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Language ဆိုပြီး ကမ္ဘာလုံးပုံလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ….။
အဆင့်(၂) ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Advaced Settings ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ...။
အဆင့်(၃) ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Override for default input method ဆိုတာကိုရှာပါ...။ အဲဒီအောက်က ဘားလေးထဲမှာ English(United States)- Zawgyi Myanmar Unicode L ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပါ... ပြီးရင် Save လိုက်ပါ...။ ဒါဆိုရင် Zawgyi Font ကို windows 8 မှာ အသုံးပြုလို့ရပါပြီ...။
မိမိဖုန်းမှာ virus ရှိမရှိ သိရှိ နိုင် မည့် နည်းလမ်းများ နှင့်အကြံပြု ချက်
phone သို့ မဟုတ် tablet တွေမှာ virus ကိုက် နေ ပြီ လား ........? အရမ်း ကို ခက် တဲ့ ပြသနာ မဟုတ် တဲ့ အတွက် မိမိ ကိုယ် တိုင် ..အလွယ် တစ်ကူ virus တကယ် ရှိ မရှိ ကို အောက်ပါ အချက် အလက် တွေ ကို လေ့ လာ ပြီး ဖြေ ရှင်း လို့ရပါ တယ်။
virus ရှိတဲ့လက္ခာဏာ များ
Slow function ။ မိမိ ဖုန်း ရဲ့လုပ် ဆောင် မှူ့ တွေ တဖြည်း ဖြည်း နှေးကွေး လေးလံလာတဲ့ အခါ menu ကနေ မိမိ တို့ ဖွင့် လို တဲ့app တွေ ကို2-5 second လောက် အထိ စောင့် ဆိုင်း နေရ တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်ရံ မှာ နှစ်ချက် လောက် နိုပ်ပြီး ဖွင့် ရ ခြင်းမျိုလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် virus စတင် ဝင်ရောက် နေ ပြီ လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။
frequent freezing ။မိမိဖုန်းကို အသုံးပြု နေ စဉ် ရုတ်တရက် hang ပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ restart ပြန်ချပေးရခြင်း။restart ချ ပေး တာ တောင် power ပိတ်မရ တဲ့ အတွက် battery ထုတ်ပြစ်ရခြင်း။
switching of Automatically ။ တစ်နေ့ မှာ ( ၃-၄ ကြိမ် )မိမိ ဖုန်းဟာ အလိုအလျောက် ဖုန်းပိတ် ပိတ် သွားခြင်း။
Restarting ။ တစ်ခါ တစ်ရံ မှာ မိမိ ဖုန်းဟာ ပိတ် ရမဲ့ အစား အလိုအလျောက် restart ကျသွားခြင်း
no booting properties ။ တစ်ခါတစ်ရံ virus ဝင်ရောက်မှူ့ ကြောင့်boot တက် မလာ တော့ ပဲ blank screen နှင့်ဖုန်းအသုံးပြု ဖို့ အဆင်မပြေခြင်း။
failure of some application ။တစ်ချို့သော application များကောင်းစွာ အလုပ် မလုပ် တော့ ခြင်း။
အထက်ပါ ဖော်ပြ ချက် တွေ နဲ့ကိုက်ညီမှူ့ ရှိ နေပြီဆိုရင်တော့ သင့် အနေ နဲ့မိမိ ဖုန်းမှ virus ကို ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ ရှင်းလင်းသုတ်သင် ဖို့ လို အပ် လာပါပြီ။
သင့် ဖုန်းက virus ကို သုတ်သင် ဖို့ အတွက် အကြံပြုချက်
virus ကို MMC Card ထဲအထိ အမှန်တကယ်သတ်ပေးနိုင်တဲ့apk တစ်ခုခု ကို insall လုပ်ပြီးအသုံးပြု ကြည့် ပါ။
မိမိတို့ ဖုန်းကို virus သတ်လို့ အဆင်မပြေ နိုင်တော့ ဘူး ဆို ရင် menu &gt;setting ကနေ reset ချ ပြီး orginial ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့် ပါ။
တကယ်လို့rest ပြန် လုပ် ဖို့ အခက် အခဲ ရှိနေ သေးတယ်ဆို ရင် (*2767*3855# ) ကိုရိုက်ပြီးphone memory (internal memory ) ကို formart ချပြီးအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက် တွေနဲ့ ဖြေ ရှင်းလို့ အဆင်မပြေ တော့ ဘူးဆို ရင် ဖုန်းကို flashing လုပ်ပြီး အကောင်းပကတိ လုပ်ဆောင် နိုင် တယ်ဆို တဲ့ အကြောင်း အကြံပြု တင်ပြပါရစေ။
ပျော်ရွင်စရာ စကားအလှ .apk
ဒါလေးကတော့ ပျော်ရွင်စရာ စကားအလှ လို့အမည်ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ဘာတွေလဲဆိုတော့
စကားပြောတဲ့နေရာ အံဝင်ခွင်ကျပြီး သေသေသပ်သပ်ပြောဆိုထားပြတဲ့ apk လေးပါ
လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်
✏Total SmS Control v2.1.5 for Android Apk နှင့်အသုံးပြုပုံ✏
Posted by : ကိုဇော် သွင် Saturday, June 28, 2014
-Apk file size 858KB ​လေးပဲရှိပြီး​တော့
-Android OS Version 1.6 နှင့်​အထက်​ရှိ
ဖုန်းများမှာထည့်​သွင်း installing လုပ်​၍
-အောက်က လင့်ခ် မှာဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ-
★Total SMS Control အသုံးပြုပုံ★
-ပြီးရင်ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို တဖက်သူရဲ့ဖုန်းထဲကို bluetooth/zapya/flash transfer နှစ်သက်
ရာfile share တဲ့ app တစ်ခုခုနဲ့ share လိုက်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်ပေးပါ
-အောက်ဆုံးက ok ကိုနှိပ်ပါ။
-apk ကိုသူ့ဖုန်းထဲမှာမမြင်ကိုသူ့ဖုန်းထဲမှာ မမြင်
စေဖို့အတွက် parental control mode နေရာကို နှိပ်ပြီး off ကို on ပြောင်းပေး၊yes ကို
-Emai ကနေတဆင့်သိချင်ရင် forward to Email နေရာ
-Twitter ကနေသိချင်ရင် forward to Twitter
-SMS မက်ဆေ့ခ်ျကနေသိချင်ရင် forward to SMS နေရာကို နှိပ်ပေးပါ။
-Total SMS Control အောက်က ပေါ်လာတဲ့
-ပြီးရင် Set up destination Phone Number
-အဲ့ဒိမှာ Enter The Phone Number ဆိုတဲ့ အကွက်နေရာလေးထဲကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပြီး
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို 09 ခံပြီးရိုက်ထည့်ပေး၍
-အားလုံးပြီးရင် back key နဲ့ ဆုတ်ပြီး အဆုံးထိ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
-apk တွေအထဲလိုက်ရှာကြည့်၊ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို hide လုပ်ထားတာကြောင့် ဆော့ဖ်ဝဲက ပျောက်နေပါလိမ့်မယ်။သူ့ဖုန်းထဲကို ဒီဆော့ဖ်ဝဲထည့်ထား
-အဲ့ဒိတော့ သူ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကို ကိုယ့်ဖုန်း
သူ့ဆီဆက်သွယ်သမျှတွေကို Gmail တို့် SMS တို့ကနေတဆင့်ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုသူ့ဘက်ကသာ၂ဆ(ဥပမာ:သာမန် ၅၀ ဖြတ်ရင်၂ဆဖြစ်တာကြောင့် ၁၀၀ ကျပ် သူ့ဘက်က
-Application Manager ထဲဝင်ကြည့်ရင်တော့
ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲ ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒိတော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ပြန်ဖြုတ်ပေးချင်ရင်တော့
ဖုန်းရဲ့ setting>application manager(all application)>ထဲဝင်ပြီး အခုဒီ "Total SMS Control" ဆော့ဖ်ဝဲကို ပြန်ပြီး uninstall လုပ်၍
27 June 2014 21:04(+0630) (၁ ရက် ခန့်က)
အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ အဆင်ပြေစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်သာ ရှိပါတယ်။
Huawei Device Codes
1. *#*#284657#*#* (Project MenuAct)
2. *#*#4636#*#* (Testing)
3. *#*#checkin#*#* (dial code ..check for update)
4. *#*#7780#*#* (Forafactory data reset)
5.*2767*3855# (For Factory Format...ပုံမှန်သုံးသူများမစမ်းသင့်ပါ)
6. *#*#197328640#*#* (change settings in the service mode)
7. *#*#232338#*#* (Show Wifi Mac Address)
8. *#*#1472365#*#* (GPS Test)
9. *#*#232331#*#* (Bluetooth test)
10. *#*#232337#*#* (Bluetooth device Show Address)
11. *#*#1111#*#* (FTA SW Version)
12. *#*#2222#*#* (FTA HW Version)
*#*#0283#*#* (Packet loopback)
Posted by lin linn at 6:37 AM
27/6/2014 ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားကြသူ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ အနေနှင့် ၄ နှစ်တာ သက်တမ်းကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ယခုအခါ နောက်ထပ် သက်တမ်း (၂) နှစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရမှ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တရားဝင် သက်တမ်းတိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထိုသုိ. မိမိတို.နေထိုင်ခွင့် (ဗီဇာ) သက်တမ်းတိုးရာတွင် အထူးသတိပြုသင့်သည့်အချက်များ ( ၅ ) ချက်ရှိပြီး မှန်ကန်ပြည့်စုံရန် အထူးဂရုပြုဖို.လိုအပ်ပါသည်။
t မူရင်း ၂။ မိမိ ဓါတ် ၁။ Passporပုံ(၄) ပုံ ၃။ အလုပ်ရှင် ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.) ၄။ အလုပ်ရှင် ၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.) ၅။ အလုပ်ရှင် ၏ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ ( ခိုတာ) (ယခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်) လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်များ၏ ပါဝင်မှု. အားနည်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ဆင့်အတွက် နားလည်မှု.မရှိခြင်းတို.ကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား အများစုမှာ ကြားခံ ပွဲစားများ(အေးဂျင့်များ) မှတဆင့် ပြုလုပ်နေကြရပြီး ကုန်ကျစရိတ်များမှာလဲ နယ်မြေဒေသ အလိုက် ၆၅၀၀ ဘတ် / ၇၀၀၀ ဘတ်/ ၇၅၀၀ ဘတ် /၈၅၀၀ဘတ်/ ၁၂၀၀၀ ဘတ် စသဖြင့် ကွာခြားသည်ကိုတွေ.ရှိရသည်။ အမှန်တကယ် မှာမူ မိမိ၏အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပါက ၄၀၀၀ ဘတ် ခန်.သာ ကုန်ကျနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်၇န် အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့် ကြားခံပွဲစားများကောက်ခံသည့် ငွေကြေးကိုပေးကာ ပြုလုပ်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို.ပြုလုပ်ရာတွင် အချို. မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ အချက် (၅)ချက်အရ အချက် ၃/၄/၅ ကို မိမိအလုပ်ရှင်ထံမှ တောင်းယူခြင်းမရှိပဲ (သို.) အလုပ်ရှင်များ မှ မပေးသောကြောင့် ကြားခံ ပြုလုပ်ပေးသူများအား ၀ကွက် အပ်လိုက်ရသည်လဲရှိသည်။ှ္ကုဤတွင် ကြားခံပြုလုပ်ပေးသူများ မှ အငှားအလုပ်ရှင် နှင့် အငှား နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့် (ခိုတာ) တို. ကို အပိုငွေကြေး ကောက်ခံလျှက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ထိုသုိ.ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ မှာ အလုပ်ရှင် အမည် ၊ နေရပ် မတူညီခြင်း ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မတူညီခြင်း တို. ဖြစ်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ မိမိ အလုပ်ခွင်တွင်း ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ ဖမ်းဆီးခံရနိုင်သည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
* အမှန်တကယ် ပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များမှာ * ၁။ မိမိအလုပ်ရှင်အား ခွင့်တောင်းလျှက် သဘောတူညီချက်ရယူပါ ၂။ မိမိအလုပ်ရှင်အတွက် နိုင်ငံခြားသားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ အား အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ပါက ကြားခံပွဲစားမှ တဆင့် မှန်ကန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ * အလုပ်ရှင် အတွက် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား ခေါ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာတောင်းခံရန်လိုအပ်ချက်မှာ
* ၁။ အလုပ်ရှင်၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.) ၂။ အလုပ်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.) ၃။ အလူုပ်အမျိုးအစားအလိုက် စာရွက်စာတမ်းများ (က) ရော်ဘာခြံလုပ်သား ဆိုလျှင် ဥယျာဉ်ခြံပိုင်ဆိုင်မှု.အထောက်အထား (ထဗီယမ်ထိဒင်း) (ခ ) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားသည့် အဆောက်အဦးပုံစံ (ဂ ) ပုဇွန် မွေးမြူရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ပုဇွန်ကန် ပိုင်ဆိုင်မှု. အထောက်အထား စသဖြင့် အလုပ်ရှင်၏ အထောက်အထားများအား အလုပ်ရှင်၏ လက်မှတ်နှင့်အတူ ပူးတွဲပြီး နယ်မြေ အလုပ်သမားဦးစီးဋ္ဌာန ရုံးများတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသုိ. ပြုလုပ်မှသာ မိမိ အလုပ်ရှင်အမည် နှင့် မိမိအလုပ်အကိုင် မှန်ကန်မည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ အရေးယူခြင်း ခံရမည်မဟုတ်ပါ။ *
သက်တမ်းတိုးပြီးပါက ရရှိလာမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
* ၁။ မိမိPassport စာအုပ်ထဲတွင် အလုပ်ရှင်အမည် နေရပ် ဖြည့်စွက်ထားသည့် NAN-LA VISA
စာမျက်နာ ၂။ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် ငွေပေးချေပြီးကြောင်း ပြေစာ စာရွက် တို.ကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး ပါက သက်တမ်း တိုးပြီးသော မိမိ Passport နှင့် မိမိ Work Permit အားလက်ခံရရှိပြီးပါက မိမိနေထိုင်ရာ နယ်မြေ ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေး အာမခံ (ဆေးရုံဘတ်) ပြုလုပ်ပြီး ဆေးရုံမှ ထုတ်ပေးသော သွေးစစ်လက်မှတ် နှင့် မိမိ Passport မိတ္တူ ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် ငွေချေပြေစာWork Permit အတူ နယ်မြေ အလုပ်သမားရုံးသို. ပူးတွဲတင်ပြပြီး Work Permit စာအုပ် အားတောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄ နှစ်ပြည့် သက်တမ်းတိုး လုပ်ငန်းစဉ် အနေနှင့် စာရွက်စာတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့်ပြုလုပ်ပါက ကြာမြင့်ချိန် မှာ (၁၀) ရက်မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ပြီးဆုံးပါသည်။
လေးစားမှု့ ဖြင့် မင်းလွမ်းနောင် (ပန်းတနော်)
ကျွန်တော်အရင်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ Root မလိုတဲ့ မြန်မာဖောင့်ပါ အရင်က မဖြစ်နိုင်ဘူး လှောင်တာပြောင်တာခံရပါသေးတယ် အရင်က apk နဲ့ ထုတ်မလို့ ကျွန်တော်ပညာ အားနည်းလို့ မထုတ်နိုင်တော့ပါ ရနေတာကြာပါပြီ အမြင်ကတ်လို့ မတင်တာပါ အခုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ကြိုက်ရင်ဒေါင်းပါ မကြိုက်ရင် ကျော်သွားပါ ဒါပါဘဲ ခဗျားတို့ အဆင်ပြေရင် ပျော်ပါတယ် အဆင်မပြောတာရှိလဲပြောကြပေါ့ မူရင်းလင့်ကနေရှယ်ပေးပါ ဘယ်လောက်ဒေါင်းလဲသိချင်လို့ ပါ အလုံးတိုင်းမရရင်တော့မဆဲနဲ့ ပေါ့ မရတဲ့ အလုံးတွေရဲ့ model, build number နဲ့ android version တော့ ပြန်ပြောခဲ့ ကြပါ update လုပ်နိုင်အောင် လို့ ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
-Root application ၁၁မျိုးနှင့်​၊မြန်​မာ​ဖောင့်​န်​
ချိန်းဖို့အတွက်​ MMAio Zawgyi Fontchanger
apk, စာရိုက်​ဖို့အတွက်​ frozen keyboard,
​ဖောင့်​န်​ပြင်​ဖို့အတွက်​ fepfz apk တို့ကို၊တစ်​​နေ
- Root လုပ်​တယ်​ဆိုတာဖုန်းကိုမိမိစိတ်​ကြိုက်​ပြုလုပ်​ဖန်​တီးနိုင်​ဖို့ထွင်း​ဖောက်​လိုက်​တာမျိုးပါ။
သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ အသက် ၊ လေဒဏ် ၊ မိုးဒဏ် တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မားမားမတ်မတ်
ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့။
နည်းပညာမှာတော့ ဒီ Root ဆိုတာ Linux Open Source Operation System
ရဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။ Android ဆိုတာလဲ linux ကိုအခြေခံ ဖန်းတီး
ပြုလုပ်ထားတာပါပဲ။ Root ဆိုတာက Linux မှာဆိုရင်တော့ System ရဲ့ အဓိက
အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိရာ နေရာကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Android Phone တွေမှာဆိုရင်လဲ ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ လည်ပတ်တဲ့ စနစ်ကို
ထည့်သွင်းထားတဲ့ အဓိက နေရာ တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - Windows Xp/7စသည်ဖြင့် windows အသုံးပြု
Computer တွေမှာဆိုရင်လဲ Windows ရှိနေတဲ့ (Eg: C:/ )နေရာမျိုးပေါ့။ အဲလောက်ဆို နားလည်မယ်လို့
Root ဆိုတာ ဘာလဲ ။ ဘယ်လို နေရာမျိုးလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အဲလို အဓိကကျတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာ ၊ တစ်ခုခု မှားလုပ်မိရင် System တစ်ခုလုံး
သုံးမရအောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ကွယ်ဝှက်ထားပါတယ်။
အသုံးပြုသူ user တွေ မတွေ့အောင် ၊ အသုံးပြုလို့ မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ??
ရှင်းရှင်းလေးပါ .. ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ......
Root မလုပ်ပဲ Official သုံးနေလို့ရောမရဘူးလား။ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လေးသုံးချင်တယ်။
website တွေ ၊ Forun တွေ ၀င်ကြည့်ချင်တယ်။ Chatting ထိုင်ချင်တယ်။
အဲဒီအတွက် ဖုန်းမှာ မြန်မာလို အသုံးပြုချင်တယ်။ မြန်မာလို စာရိုက်ချင်တယ်။
နောက်တစ်ခု ကိုယ့်ရဲ့ Android Version ကို Update လုပ်ချင်တယ်။
အသစ်အသစ် လေးတွေကို လူတိုင်းမက်မောတက်ကြတာပဲလေ။ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက ပါလာတဲ့
Application တွေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်တာတွေက များနေတယ်။ ဖြုတ်ချလို့လဲ
မရဘူး။ နောက်တစ်ခါ Android Application တွေကလဲ အစုံပဲ။ ပေါလိုက်တာ ။
IPhone လိုပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်ထည့်စရာလဲ မလိုဘူး။ game တွေကလဲ အစုံပဲ။
စိတ်ကူးရှိတိုင်းထည့်နဲ့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Internal memory မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာမယ်။
အဲဒီအခါ ဖုန်းက လေးလာတယ်။ SD Card ထဲရွှေ့ထားချင်ပေမဲ့လည်း ရွှေ့လို့
မရဘူး။ နောက်ကိုယ့်ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို Backup လုပ်ထားချင်တယ်။
မတော်လို့ ဖုန်းကပျက်သွားရင် အထဲက မှတ်ထားတဲ့ Content တွေ ၊
Message တွေ စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲ။ ပျက်တာ သွားရင်တော့ ကြေကွဲပြီ။
အဲဒီလို ပြဿနာတွေ အများကြီးကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်က တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။
ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ Root နေရာ ၊ သူတို့တွေ ဖျောက်ထားတဲ့
SuperUser ကို ကျွန်တော်တို့က လုယူကြရမှာပေါ့။ SuperUser
ဆိုတာတစ်နည်းအားဖြင့် Windows မှာလိုဆိုရင်တော့ Administrator
လိုမျိုးပါ။ Android OS တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ခွင့်ရှိတဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပေါ့။
အဲဒီလို System တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက်မွှေနှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့
Android ကို Root လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဆို ဘာကြောင့် Root
လုပ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်-
- -ဖုန်း Handset ​ပေါင်းများစွာရှိတာ​ကြောင့်​ Device အားလုံးနဲ့ အဆင်​​ပြေ/မ​ပြေ
မ​ပြောနိုင်​ပါ။Android Version 4.3 နဲ့ 4.4
​တွေမှာ​တော့ မ root ​ပေးနိုင်​ပါဘူး-
-ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ apk တစ်​ခုမရ တစ်​ခုနဲ့ စမ်းသပ်​ပြီး
root ကြည့်​ချင်​တယ်​ဆိုရင်​​တော့ ​အောက်​က
လင့်​ခ်​ ​တွေမှာ ​ဒေါင်းလုပ်​ယူသွားလိုက်​ပါ-
✌root apk အားလုံးကို rar file တစ်​ခုထဲ
Rar file ကိုဖြည်​ချလိုက်​ပါကအခုတင်​ထားတဲ့
★Rar file အား​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
(၁)Pro Myanmar Root v1.3.6 အား​ဒေါင်းရန်
(၂)V roor v1.0.5.1 အား​ဒေါင်းရန် လင့်​ခ်​​
(၃)Root Master v1.3.6 အား​ဒေါင်းရန် လင့်​ခ်​​
(၄)Mobile Easy root v1.2.1 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​
ဒီ mobile easy root apkက​တော့ version4.3 ​တွေကို​တောင်​
(၅)Frama root v1.9.1 အား​ဒေါင်းရန် လင့်​ခ်​
(၆)Exynos Abuse v1.40 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​
(၇)Baidu root v2.3.4 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​​
(၈)360 root v1.1 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​​
(၉)Z4 root v1.2.1 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​​
(၁၀)King root v2.3.0 အား​ဒေါင်းရန်လင့်​ခ်​
(၁၁) R-root(onekeyroot)-v1.3.8 အား​ ​ဒေါင်းရန်​
-ဖုန်းဗားရှင်း v1.6 က​နေ v4.3.3 အထိဖုန်းများ
" MMAio_Zawgyi_Fontchanger" Apk ကို
MMAio Zaygyi Charger Apk အား​ဒေါင်းရန်​
Fepfz v2.1 Apk အား​အောက်​ကလင့်​ခ်​မှာ​
Fepfz v2.1 အား​ဒေါင်းရန်​
"Frozen keyboard pro v0.5.3 အား​အောက်​ကလင့်​ခ်​မှာ​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲယူပါ-
Frozen keyboard pro v0.5.3 အား​ဒေါင်းရန်​
ကျနော်အခုပြောမှာကတော့ Phone Network တွေအကြောင်းပါ။ကျနော်တိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကတော့ GSM | WCDMA | CDMA 800MHZ | CDMA 450 MHZ စတဲ့ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းအမျိုးအစား တွေအကုန်လုံး အင်တာနက် (Data) အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် CDMA 450 MHZ မှာတော့ အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက လှိုင်းအလျား နိမ့်လို့ပါ။ Mobile Phone Data စနစ်မှာ GPRS,EDGE နဲ့ 3G ယခုဆိုလျင်နိုင်ငံရပ်ခြားတွေမှာ 4G စနစ်ကိုတောင်အသုံးပြုနေ ပီဖြစ်ပါတယ်။ GPRS(General Packet Radio Service) GPRS ဆိုတာကတော့ Packet-based ၀ါယာလက်စနစ် ကို အခြေခံထားပါတယ်။ကျနော်တိုအသိများ တာကတော့ 2G Network လိုခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် 2G Network ဆိုလျင် Download Speed (( 144 Kbps )) လောက်ထိရနိုင်ပါတယ်။GPRS ကတော့ ကန်သက်ချက်တွေရှိပါတယ် ကျနော်တိုဖုန်းပြောနေရင်း Data စနစ်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။ EDGE(Enhanced Data GSM Evolution) GPRS နဲ့ EDGE ဆိုတာ 2G နက်ဝက်နည်းပညာတစ်ထည်းပါပဲ။ဒါပေမယ် EDGE က GPRS ထက် Download Speed ပိုများပါတယ်။384Kbps နည်းပါးလောက်ရနိူင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ် ရံမှာ EDGE ကို 2.5G Network လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ 3G နက်ဝက်ဆိုတာကတော့ Video Calling,MMS စတဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေအများကြီးအပိုပါလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ချပေးထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Download Speed ကတော့ အနည်းဆုံး 3.1Mbps အထိရနိုင်ပါတယ် HSDPA(Hight-Speed-Down-link Packet Access) HSDPA ဆိုတာကတော့ 3G နက်ဝက်အပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။ ရိုးရိုးသာမန် 3G နက်ဝက်ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ Download Speed ((14Mbps )) အထိရရှိနိုင်ပါတယ်။HSPDA ကိုတစ်ခါတစ် ရံမှာ 3.5G နက်ဝက်လိုလည်းခေါ်ကြပါတယ်။ HSPA+(Evolved High-Speed Packet Access) HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) ဆိုတာကလည်း 4G Nework နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။သူရဲ့ အမြင့်ဆုံးရနိူင်တဲ့ Download Speed ကတော့ ((168Mbps )) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ WCDMA ရဲ့အရှည်ကောက် ကတော့ "Wideband Code Division Multiple Access" လိုခေါ်ပါတယ်။ 4G LTE(Long Term Evolution) LTE ဆိုတာကတော့ 4G Network အပေါ်အခြေခံပြုလုပ်ထားသောစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ HD ဇာတ်ကားတွေကို အထစ်အငေါ့မရှိကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့အမြင့်ဆုံး Download Speed ကတော့ ((222.96Mbps )) ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Credit >IT (ကိုထိုက်)
Android ဖုန်းမှာ ဆော့ဝဲတွေ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီ ထည့်မရပ...
IDM Fix Fake Serial (Only Key) IDM အဆင်မပြေသူများ ...
Computer Viber မြန်မာစာ မမြင်ရတော့ရင် Update တက်လာ...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတို. သိသင့်သော ၄ ...
Phone အတွက် Website တွေထဲကနေ Vidoe တွေ ဒေါင်းလုပ်ယ...
မြန်မာဇာတ်ကားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနို...
♪ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အတွက် Linkedin ရဲ့
မသုံးစေချင်တဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထားပေးမယ့် -...
Android ဖုန်းအတွက် Video Record လုပ်နိုင်တဲ့ Scree...
ဖုန်းထဲမှာ Screenshot ရိုက်ချင်ရင် ဖုန်းကိုလှုပ်ရမ်...
software မလိုဘဲ video တွေmusicတွေPhotoတွေ အခြားအခြ...
VRoot 1.7.8.7753 for PC
Android 4.2 and + အထက်ဖုန်းများမှာ မြန်မာစာ အဆင်ေ...
Lenovo A516 Android 4.2.2 ဖုန်းအား Baidu Root APK ...
MMSD Smart Zawgyi v1.5 (Android version 1.6 မှ 4.2...
♪ အရောင်ရှစ်မျိုးပါဝင်တဲ့ - Frozen Keyboard Colour...
✏ကို​ဇော်​သွင်​(သတင်းစုံ)v1.2 Latest Version(သတင်...
♪ Samsung က Galaxy S5 ဗားရှင်း အသစ်တစ်မျိုးကို ကို...
iPhone_iPad ဆိုင်ရာ အိုင်ဖုန်းတွေကိုင်တော့မယ်ဆို မ...
မြန်မာစာတမ်းထိုးပြီးသား နိုင်ငံခြား Video ကားများက...
✏ဖုန်းများ အားကုန် အောင် သုံးခြင်း ကြောင့် ဖြစ်တက်...
Android ဖုန်းအတွက် Mr Bean Crazy Face.( ဟာသ စကာြးေ...
Oppo Phone မှာပါတဲ့ Myanmar keyboard နဲ့ Myanmar L...
♪ Road to Brazil 2014 v1.0.5 APK [Unlimited CoinsG...
♪ လေချွန်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့် Whistle Camera v1...
✏Wun Zinn Apk v1.5(for android)✏
iPad နှိုင်းယှဉ်ချက် ♫
♪ Android ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို အလွယ်တကူ root ပြုလုပ်ခြ...
♪ Sexy Movies & Game & Application Selection - Par...
✏Phonto v1.5.3 App(for android)✏
♪ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ မ...
ဘောလုံးပွဲတွေကို ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်ရင်T...
♪ World Cup 2014 ပွဲစဉ်များကို ဖုန်းထဲကနေတိုက်ရိုက...
ထိုင်း စစ်အစိုးရက တရားမ၀င်အလုပ်သမားများကို ဆက်တိုက...
ချင်းမိုင်မြို့က မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းပြ
♪ လေ့လာထားသင့်တဲ့ - Mobile Question And Answer ♫
♪ ဗေဒင်ဝါသနာအိုးများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း (95%မ...
အဲကွန်းအခန်းထဲတွင် ဖယောင်းတိုင် မထွန်းမိပါစေနဲ့
✏EUI Fonts installer Apk(for huawei)✏Posted by : က...
Zawgyi KitKat2014 and Zawgyi One2014 ဗားရှင်းများယ...
♪ လတ်တလော Mobile ဈေးကွက်တွင် Customer တွေရဲ့ အဖြစ...
sony ဖုန်းများ Unlock Bootloader ဖွင့်ဖို့ Unlock ...
. ✏​အောင်​ဘာ​လေထီ၊၂လုံး၊၃လုံး၊၄လုံး ထီများ တိုက်​ရ...
♪ စားဖွယ် မုန့်နာမည်များနဲ့ Android OS ဗားရှင်များ...
♪ Android တွင် Bump , iBeacon တို့နှင့် ဆင်တူသည့် ...
Samsung ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်OS ဖြစ်တဲ့ Tizen နဲ့ပွဲထွက်...
အမြန်လမ်းမှာခရီးသွားနေသူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဖုန်းေ...
★★ Unroll Me Version : 1.4 Apk (Android Game) ★★
♪ နောက်ဆုံးဗားရှင်းAndroid OS KitKat ဟာ ဌင်း OS ပေ...
မှတ်ပုံတင်ရှိသူတိုင်း(၁၅၀၀) ကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည...